Xeesha Cusub ee Tuugada Gawaarida - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xeesha Cusub ee Tuugada Gawaarida
La daabacay tisdag 5 juni 2012 kl 13.45
Ha u qaadan in gaarigaagu ammaan yahay, kolka aad xirto albaabbadiisa. Ciidanka ammaanka ayaa xaqiijiyay iney jiraan kooxo tuugo ah ee xariifiin ku ah jabsiga gawaarida. Waana hab cusub oo ey ku xadaan alaabada qiimaha ku fadhiya ee gawaarida ku jira.
Habka ey u dhacaan ayaa ah iyaga oo isticmaalaya dire elektroonik ah, midkaasina oo hor-istaagaya in baabuurku is xiro, kolka aad badhanka furaha gaariga riixdo. Hase yeeshee aanu gaarigu ximeeyn xitaa haddii uu leeyrku baxo sidii isagoo xirmay oo kale.
Tuugada ayaa haddaba gaariga u imaneeysa isaga oo furan kolka uu mulkiiluhu ka tago, isagoo u haysta in gaarigiisu ammaan yahay. - Mulkiileyaasha ey amuurtani la soo gudboonaatey ayaa fajacsan kolka ey ciidanka ammaanka u tagayaan si ey dacwad uga gudbiyaan dhacdadaa, maadaama alaabtoodii maqanta tahay gaarigoodiina uu dhan yahay.
Waxaa loo haystaa in gaarigu ammaan yahay, hase yeeshee aannu ahayn. Waa in dib la isugu noqdaa, sida uu sheegay Dan Falconer, ahna farsamayaqaan mashiinnada ee ka howl-gala shirkadda ceeymiska ee If.
Shirkadaha ceeymiska ayyaan inta badan mag-dhaw siin mulskiileyaasha ey xatooyadu la soo gudboonaatey haddii aannu gaarigu xireeyn, hase yeeshee xeeshan cusub ayaa hor-kaceeysa in xaalad walba si gaar ah loo eego shirkaduhuna kala shaqeeyaan ciidanka ammaanka.